एलिमेन्टर: सुन्दर WordPress पृष्ठहरू र पोष्टहरू डिजाईन गर्नका लागि एक शानदार सम्पादक Martech Zone
आज दिउँसो मैले केहि घण्टा लिएँ र इलिमेन्टर प्रयोग गरेर मेरो पहिलो ग्राहक साइट निर्माण गरें। यदि तपाईं वर्डप्रेस ईन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने तपाईंले एलिमेन्टरको बारेमा बज सुनिसकनु भएको छ, उनीहरूले भर्खरै २ लाख स्थापना गरे! मेरो साथी एन्ड्र्यू, जो संचालन गर्दछ नेटगेन एसोसिएट्स, प्लगइनको बारेमा मलाई बताएँ र मैले यो जताततै लागू गर्न असीमित इजाजतपत्र खरीद गरें!
WordPress ले यसको अपेक्षाकृत बर्बर सम्पादन क्षमताहरूमा तातो महसुस गरिरहेको छ। उनीहरूले हालसालै गुटेनबर्गलाई अपडेट गरे जुन ब्लक-स्तर सम्पादक हो जसले केही थप कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ ... तर यो त्यस्तो होइन जहाँ बजारमा भुक्तानी विकल्पहरू नजिक छन्। सबै इमानदारीतामा, म आशा गर्दछु कि तीनिहरू यी अधिक उन्नत प्लगइनहरू मध्ये एउटा मात्र खरीद गर्छन्।
पछिल्ला दुई वर्षदेखि, म प्रयोग गर्दैछु अवाडा मेरो सबै ग्राहकहरु को लागी। विषयवस्तु सुन्दर ढंगले निर्माण गरिएको छ, स्वरूपण क्षमताहरू कायम गर्न दुवै थिम र प्लगइनको संयोजन प्रयोग गर्दै। यो दुबै राम्रोसँग समर्थित छ र केहि शानदार तत्वहरू छन् जुन पहिले विकास वा खरीद आवश्यक पर्दछ।
Elementor फरक छ किनकि यो केवल एक प्लगइन हो र मूल रूपमा कुनै पनि थिमको साथ काम गर्न सक्दछ। यस ग्राहकको लागि मैले निर्माण गरेको साइटमा, मैले भर्खर एउटा आधार विषयवस्तु प्रयोग गरें जुन एलिमेन्टर टोलीले सिफारिस गर्यो एलिमेन्टर हेलो थीम.
म टाँसिएको मेनूहरू, फुटर क्षेत्रहरू, अनुकूलित ल्यान्डि pages पृष्ठहरू, र फारम एकीकरणको साथ पूर्ण उत्तरदायी साइट निर्माण गर्न सक्षम भयो ... बाकसको ठीक बाहिर। यसले एलिमेन्टरको हाइरार्कीको अभ्यास गर्न अलि अलि बढायो, तर एकपटक मैले टेम्प्लेटिंग, सेक्सन क्षमता र तत्वहरू बुझेपछि म केही मिनेटमा सम्पूर्ण साइट तान्न र ड्रप गर्न सक्षम भएँ। यसले मेरो समयको बचत गर्‍यो र मैले कोडको एकल लाइन वा सीएसएस सम्पादन गर्नुपर्दैन!
WordPress पपअप प्रकाशन नियम र डिजाईन
यो प्राय: प्लगइन त्यस्तो अविश्वसनीय क्षमताहरूको साथ आउँदैन, तर एलिमेन्टरको साथ, तपाईं सर्तहरू, ट्रिगरहरू, र उन्नत नियमहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ कसरी पपअपहरू प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ ... सबैलाई सजिलो इन्टरफेसमा:
डिजाईनर एकदम अपूर्व छ, र तीनिहरू तपाईलाई डिजाईन गर्नका लागि केहि अफ-शेल्फ उदाहरणहरू प्रदान गर्दछन्!
पपअप कार्यक्षमतामा थप, मार्केटिंग सुविधाहरू समावेश गर्दछ
कार्य लिंक - सजिलैसँग तपाईंको दर्शकहरूसँग व्हाट्सएप, वेज, गुगल क्यालेन्डर र अधिक अनुप्रयोगहरू मार्फत जडान गर्नुहोस्
काउन्टडाउन विजेट - तपाईंको प्रस्तावमा काउन्टडाउन टाइमर थपेर जोडतोडको भावना बढाउनुहोस्।
फारम विजेट - अलविदा ब्याकएन्ड! तपाईंको सबै फारमहरू प्रत्यक्ष सिर्जना गर्नुहोस्, एलिमेन्टर सम्पादकबाट।
ल्यान्डिंग पृष्ठहरू -ल्यान्डि pages पृष्ठहरू सिर्जना गर्ने र प्रबन्ध गर्ने काम यो सजिलो भएको छैन, सबै तपाईंको हालको WordPress वेबसाइट भित्र।
रेटिंग स्टार विजेट - एक सितारा रेटिंग सहित आफ्नो वेबसाइट को लागी केहि सामाजिक प्रमाण जोड्नुहोस् र आफ्नो मनपर्ने मा स्टाइलिंग।
प्रशंसापत्र क्यारोसेल विजेट - तपाईंको सब भन्दा सहयोगी ग्राहकहरूको घुमाउने प्रशंसापत्र काराउजेल थपेर तपाईंको व्यवसायको सामाजिक प्रमाण बढाउनुहोस्।
यो उत्तम प्लगइन होइन। मैले केहि सीमाहरूमा दौडिएको छु जुन तपाईंले बुझ्नु पर्छः
अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरू - जबकि तपाइँ तपाइँको एलिमेन्टर साइट मा कस्टम पोस्ट प्रकार हुन सक्छ, तपाइँ एलिमेन्टर सम्पादक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न ती पोस्ट प्रकारहरुलाई शैली गर्न। यसको लागि एक workaround पोस्ट कोटिहरू साइट भरभरि नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्नु हो।
ब्लग अभिलेख - जब तपाइँ एलिमेन्टरको साथ एक सुन्दर ब्लग स page्ग्रह पृष्ठ बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो WordPress सेटिंग्समा त्यो पृष्ठ औंल्याउन सक्नुहुन्न! यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको एलिमेन्टर पृष्ठ विच्छेद हुनेछ। यो साँच्चिकै अनौंठो मुद्दा हो कि मलाई यस बारे थाहा पाउन घण्टा लाग्यो। जति नै मैले ब्लग पृष्ठलाई कुनैमा सेट गरेन, सबै कुरा राम्रो भयो। त्यो बम्मर हो, यद्यपि ब्लग पृष्ठ सेटिंग धेरै संख्यामा वर्डप्रेस टेम्प्लेट प्रकार्यहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। यो तपाइँको साइटलाई कुनै पनि हिसाबले रोक्न गइरहेको छैन, यो केवल अनौंठो मुद्दा हो।
लाइटबक्स समर्थन - पपअप सुविधा एकदम राम्रो छ, तर केवल एक बटन को क्षमता एक ग्यालरी वा भिडियो हेर्न लाइटबक्स खोल्न को लागी छैन। जहाँसम्म, त्यहाँ एक शानदार छ आवश्यक एड-अन यो सुविधा प्रदान गर्दछ साथै दर्जनौं।
यदि तपाईले कहिल्यै वर्डप्रेसमा इन्टिग्रेसनहरु प्रोग्राम गर्नु भएको छ भने तपाई जान्नुहुन्छ कि यो कति गाह्रो हुन सक्छ। ठीक छ, एलिमेन्टरसँग मेलचिम्पसँग पूर्व-विकसित एकीकरणहरू छन्, ActiveCampaign, कन्वर्टकिट, अभियान मोनिटर, Hubspot, Zapier, donReach, Drip, GetResponse, Adobe TypeKit, reCAPTCHA, Facebook SDK, MailerLite, Slack, र Discord!
सबै एलिमेन्टर सुविधाहरू हेर्नुहोस्
अधिक सुविधाहरूको साथ एलिमेन्टर विस्तार गर्दै!
परम एडन्स वास्तविक रचनात्मक र अद्वितीय एलिमेन्टर विजेट्सको बढ्दो पुस्तकालय हो जुन तपाईंको लागि डिजाइन सम्भावनाहरूको पूर्ण नयाँ दायरा खोल्दछ। यो अविश्वसनीय प्याकेज समावेश:
विजेट र विस्तारहरू - +०+ अनौंठो एलिमेन्टर विजेट्सको बढ्दो पुस्तकालय जसले तपाईंको डिजाइन क्षमतालाई पूर्ण नयाँ स्तरमा लैजान्छ!
वेबसाइट टेम्प्लेटहरू - १०० भन्दा बढी अत्यधिक अनुकूलन योग्य र दृश्यात्मक आश्चर्यजनक वेबसाइट टेम्प्लेटहरू जुन तपाईंको कार्यप्रवाहलाई गति दिन्छ।
सेक्सन ब्लाकहरू - २०० भन्दा बढी पूर्व-निर्मित सेक्सन ब्लकहरू केवल ताने, झार्ने र अनुकूलित गरिएका छन्, तपाईंको पृष्ठलाई केहि क्लिकहरूमा अद्वितीय डिजाइन प्रदान गर्दै।
चाहे तपाईं एक डिजाइन पेशेवर वा एक नयाँ आगमनकर्ता हुनुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको कार्यप्रवाहको गति बढाउनुहुनेछ र पूर्ण सहजताका साथ असाधारण डिजाईनहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
खुलासा: म गर्वका साथ यस लेखमा मेरो सम्बद्ध लिंकहरू प्रयोग गर्दैछु!
टैग: elementorएलिमेन्टर ऐड-अनहरूएलिमेन्ट पृष्ठ टेम्प्लेटहरूएलिमेन्टर विजेट्सलोकप्रिय WordPress प्लगइनWordPress सम्पादकWordPress पृष्ठ डिजाइनरWordPress पृष्ठ सम्पादकWordPress प्लगइन